XOG: Madha’baa in Madaxweynaha iyo R/Wasaaraha dalka ay is hor taageen weerar lagu qaadi lahaa….. |
XOG: Madha’baa in Madaxweynaha iyo R/Wasaaraha dalka ay is hor taageen weerar lagu qaadi lahaa…..
Illo wareedyo ka tirsan DFS ayaa shabakadani u xaqiijiyay in Madaxda Sare ee DFS isku Khilaafsan tahay in weerar lagu qaado Al Shabaab ku sugan Degaanada Baraawe.
Illo wareedka ayaa xaqiijinaaya, in Madaxweynaha DFS iyo Ra’isulwasaaraha qabaan in aan xiligaani lagu degdegin Weeraro lagu qaado Alshabaabka ku Sugan Degaanada Baraawe, halka Taliska AMISOM ay iyaguna ka aaminsan tahay in Bisha Ramadaan ka hor lasoo afjaro Alshabaabka ku sugan Degaanada Baraawe.
Madaxweynaha iyo Ra’isulwasaaraha ayaa iyagu qaba in lasoo gaaray xili Cibaado oo Ramadaan ah, haddii ay dhacdo in weerar lagu qaado Degaanada Baraawe oo ay ku awood badan yihiin Alshabaabku ay suuragal noqon karto in Alshabaabku ay ku dhaqaaqaan falal lagu carqaladeynaayo Soonka Bulshada ku dhaqan Degaanada Baraawe, taasina ay sababi karto in Bulshadaasi ay joojiyaan Soonka maadaama ay Ehel u yihiin Dagaalo, Amaro adag iyo Arimo kale oo Lamid ah.
Sidoo kale, Taliska Sare ee AMISOM ayaa iyaguna muujiyay firfircooni ku aadab in Ramadaanka ka hor lasoo afjaro Ku nagaadida Alshabaab ay ku nagaaneyso Degaanada Baraawe, waxa ayna Afkaartaani is Khilaafsan dhalisay in si kumeel-gaar ah loosii hakiyo Dagaaladii la damacsanaa in lagu qaado Baraawe, waxaana jiro warar hoose oo sheegaya in AMISOM ay dooneyso inay dib usoo saarto Ciidamada kaga sugan Duleedka Baraawe, maadaama ay u cuntami weysay wararka mideysan ee kasoo baxaayo Madaxda Dowladda.
Dhanka kale, Waxaa manta oo ay Seddex ku tahay Villa Somalia ka socdo wada hadal u dhexeeyo Madaxweynaha, Ra’isulwasaaraha iyo Taliska Sare ee AMISOM taasi oo lagu doonayo in xal looga gaaro Khilaafka ka dhashay Weerarka la damacsan yahay in lagu qaado Alshabaabka Baraawe.